ဓမ္မနဒီ: လူသားအားလုံးအတွက် ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုဆိုတာ ဘာလဲ.?
လူသားအားလုံးအတွက် ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုဆိုတာ ဘာလဲ.?
ဦးဇင်းကို ဘာသာခြားများက လာလာမေးကြပါတယ်။ ဦးဇင်းအနေနဲ့ တခြားဘာသာတွေအပေါ်မှာ ဘယ်လိုမြင်သလဲတဲ့။ ဒါနဲ့ ဦးဇင်းလည်း ကောင်းတာလုပ်ရင် ကောင်းတာပြန်ခံစားရမယ်။ မကောင်းတာလုပ်ရင် မကောင်းတာပြန်ခံစားရမယ်။ ဒါဟာ အဓိကမိန်းဖြစ်ပေတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိကောင်းတာလုပ်ဖို့နဲ့ ကောင်းတဲ့စိတ်ထားရှိဖို့သာ အဓိကဖြစ်တယ်လို့ လိုရင်းနဲ့ ဖြေပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါနဲ့ ခုအခါမှတော့ အကျယ်တ၀င့် ဘာသာတိုင်းအတွက် အသုံးတည့်တဲ့အဖြေ ကို ဖြေပေးဖို့ရန် တောင်းဆိုသူတွေ များပြားလှတဲ့အတွက် အချိန်မရ၊ ပညာမတတ်၊ အသိပညာမကြွယ်ဝသော်လည်း တက်သိသမျှလေးကို ရသလောက်အချိန်လေးနဲ့ ဖြေဆိုပေးလိုက်ပါတယ်။
ဘယ်လူမျိုး၊ ဘယ်ဘာသာဝင်၊ ဘယ်ဘာသာမဲ့မဆို လိုက်နာကျင့်သုံးရမဲ့ အချက်က (၁၀)ချက်ရှိတယ်၊ မိမိမမြင်နိုင်သေးတာကို မယုံကြည်ဘူးဆိုရင်လည်း မိမိတို့မှာ ထောက်တည်ရာ(၄)မျိုးရှိတယ်။ အဲဒါတွေကိုသိရှိပြီး လိုက်နာကျင့်သုံးကြည့်ရန် လိုပါတယ်။ မိမိလိုက်နာကျင့်သုံး လေ့လာစမ်းသပ် လုပ်ဆောင်ပြီးသကာလ အကျိုးရှိတာကို ကျင့်သုံးရမှာဖြစ်ပြီး အကျိုးမရှိတာကို ပယ်ရပါမယ်။ ဒီအချက်တွေကို မိမိတို့ကိုယ်တိုင် လိုက်နာလက်တွေ့ကျင့်သုံးကြည့်ရင် အကျိုးမယုတ်ဘဲ အကျိုးသာရှိပါလိမ့်မယ်။ လိုက်နာကျင့်သုံးရမဲ့ အချက်တွေကတော့ ဘယ်ရာမဆို
၁။ သူများပြောသံကြားတာနဲ့ အမှန်လို့ မယုံကြနဲ့။ (သူများတွေပြောတာ ဒီပုဂ္ဂိုလ်က တန်ခိုးရှိတယ်၊ ရောဂါပျောက်အောင်လုပ်ပေးတယ်၊ သူက ပိုက်ဆံတွေရအောင်၊ အလုပ်အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးတယ်ဆို
တဲ့ အသံကြားရုံနဲ့ မယုံသေးဘဲ မိမိကိုယ်တိုင် လေ့လာပြီး မှန်ကန်ပါမှ ယုံပါတဲ့၊ ဘယ်သူကတော့ တို့ရဲ့ ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ကိုယ်တိုင်ကယ်တင်ခံရမှ၊ ကိုယ့်မကောင်းတာဖြစ်နေတာကို ကောင်းအောင်လုပ်ပေးတဲ့အခါကျမှ သူ့ဟာ ကယ်တင်ရှင်ဆိုတာ မှန်ပါလားလို့ ယုံပါလို့ပြောတာ)
၂။ ဘိုးဘွားစဉ်လာ ဆရာစဉ်ဆက်ယုံကြည်ခဲ့တဲ့ အရာဆိုပြီးတော့လည်း မယုံကြနဲ့။
၃။ သူများက ဒါလုပ်ရင် ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုပြီး အတိတ်က မှန်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးလည်း မယုံကြနဲ့။
၄။ ကျမ်းဂန်စာပေတွေမှာ ဒီလိုလာတယ်ဆိုပြီး စာပေနဲ့ကိုက်ညီရုံနဲ့ မယုံနဲ့။
၅။ ကြံစည်တွေးတောယုံနဲ့လည်း မယုံနဲ့။ (အလုပ်တစ်ခုကို စိတ်ကူးယဉ်၊ ကြံစည်ရုံနဲ့မလုပ်ဘဲ ရှေ့နောက်စဉ်းစား လေ့လာကြည့်ပြီးမှ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပါ၊ မိမိတစ်ခုခုလောက် အဆင်ပြေအောင် တစ်စုံတစ်ယောက်ဆီမှာ စိတ်ထဲကနေ တွေးတောကြံစည်ဆုတောင်းမိလို့ အဆင်ပြေသွားတဲ့အခါ ဒီလူဟာ ငါရဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲဆိုပြီး မိမိစိတ်ကြံစည်လို့ တစ်ခါလောက် မှန်သွားရုံနဲ့ မယုံနဲ့လို့ ဆိုလိုတာပါ။)
၆။ သူများဟာကိုနည်းမှီယူပြီးတော့လည်း မယုံနဲ့။ (ကိုယ့်သူငယ်ချင်း၊ မိဘဆရာသမားတွေက တစ်ခုခုကို ယုံကြည်ရင် မိမိကပါ လိုက်မယုံသေးဘဲ ကိုယ်တိုင်လေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ပြီးမှ သူများယုံကြည်တာကို ယုံသင့်မယုံသင့် ဆုံးဖြတ်ပါလို့ ပြောတာပါ။ သူများယုံတိုင်း မယုံဖို့။ သူများလုပ်တာ အကျိုးရှိသွားတာကိုမြင်ပြီး ငါလည်းအဲဒီအတိုင်းလုပ်ရင် အကျိုးရမှာပဲဆိုပြီး လိုက်လုပ်တိုင်းလည်း မဖြစ်တတ်တာမျိုး၊ သူများရေးထား၊ ပြောထား၊ ဟောထားပြီးသားကို နည်းမှီလုပ်ထားတာမျိုး၊ ဥပမာ-သူများက ဒီလိုပြောလို့ အဆင်ပြေပေမဲ့ မိမိက သူများပြောသလို လိုက်ပြောတိုင်းလည်း အဆင်ပြေချင်မှ ပြေတာမျိုးပါ။ အထင်ရှားဆုံးကတော့ ရည်စားစကားပြောတာမျိုးပေါ့။ သူများက ဒီစကားလုံးနဲ့ အဆင်ပြေပေမဲ့ ကိုယ့်ကျတော့ သူများပြောတဲ့စကားကိုနည်းမှီပြောပေမဲ့ အဆင်မပြေတာမျိုး။ ဒါပြင် သူများဘာသာက ဒီလိုဟောထားတာကို လူတွေက လက်ခံတာမို့ ဒို့ဘာသာလည်း ဒီလိုရေးရင် သူများလက်ခံမယ်ဆိုပြီး ရေးထားတာမျိုးစတာတွေကို ဆိုလိုတာပါ။ အဲဒီတော့ မိမိဘာသာ ဘယ်ရာမဆို ကိုယ်တိုင်လေ့လာစမ်းသပ်ပြီးမှ ယုံကြပါ။)
၇။ အပြင်သဏ္ဍာန် အခြင်းအရာကိုကြည့်ပြီး ယုံကြည်စရာကောင်းတယ်ဟု ကြံဆပြီးတော့လည်း မယုံနဲ့။ (တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့သဏ္ဍာန်ကိုကြည့်ပြီး သူ့ပုံစံကြည့်ရတာ တန်ခိုးရှင်ဖြစ်မယ်၊ လူကောင်းဖြစ်မယ် စတာတွေကို မယုံဖို့နဲ့ အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုလည်း အပေါ်ယံတံဆိပ်လောက်ကြည့်ပြီး ဒါက အကောင်းဆုံးတံဆိပ်ပဲဆိုပြီး မယုံကြဖို့ပါ။)
၈။ ကိုယ်ထင်ထားသလို ယုံကြည်သလို ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးလည်း မယုံနဲ့။ (ဥပမာ-သူများပြောတာ ဒီလူက လူကောင်းဆိုပြီး အသံတော့ကြားထားတယ်။ မိမိကိုယ်တိုင်တွေ့တော့လည်း သူက ကိုယ်ပေါ်ကောင်းနေတယ်။ အဲဒါမျိုးဆို လူတွေက အဲဒီလူကို လူကောင်းလို့ ယုံကြည်တတ်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်းကျတော့ ကိုယ့်ကို လိမ်သွားတတ်တယ်လေ။ အဲဒါကြောင့် အပေါ်ယံပေါင်းသင်းကြည့်ရုံ၊ မြင်ရုံနဲ့ မယုံသေးဘဲ ကိုယ်တိုင်အချိန်ပေး လေ့လာစမ်းသပ်ပြီးမှ လူဖြစ်စေ၊ ဘာသာတရားဖြစ် ယုံကြည်ကြဖို့ ပြောတာပါ။)
၉။ မှတ်ယူထိုက်၊ နည်းယူထိုက်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျှဖြင့်လည်း မယုံနဲ့။ (ဒီစကား၊ စာသားလေးကတော့ အတုယူ၊ မှတ်သးထိုက်တယ်ဆိုပြီးလည်း မယုံနဲ့ဦး။ ကိုယ်တိုင် လက်တွေ့ကျင့်သုံးကြည့်လို့ မှန်ကန်မှုရှိမှ ယုံပါတဲ့။)
၁၀။ ငါတို့လေးစားရတဲ့ ရဟန်း၊ ဆရာ၊ မိဘ၊ ဆွေမျိုးတို့ စကားပဲဆိုပြီးလည်း မယုံနဲ့။ (ငါတို့ဆရာ၊ ကယ်တင်ရှင်၊ မိဘ၊ အကိုမောင်နှမ၊ သူငယ်ချင်းတွေ စကားပဲဆိုပြီး သူတို့ကို လေးစားလို့ဖြစ်စေ၊ အားနာလို့ဖြစ်စေ၊ ယုံကြည်မှုလွန်ကဲလို့ဖြစ်စေ၊ ချစ်ခင်လို့ဖြစ်စေ၊ ကြောက်ရွံ့မလွန်ဆန်နိုင်လို့ဖြစ်စေ သူတို့စကားများကို မယုံသေးဘဲ ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်ကျင့်ကြံကြည့်ပြီး မှန်ကန်မှုရှိမှသာ ယုံကြည်ပါတဲ့။)
အထက်ပါ(၁၀)ချက်ကို မိမိတို့က သေချာနားလည်သဘောပေါက်ပြီးဆိုရင် ဘယ်လုပ်မဆို၊ ဘယ်ကိစ္စမဆို၊ ဘယ်ဘာသာရဲ့ အယူအဆ၊ အလုပ်အကိုင်၊ အတွေးအခေါ်၊ ကျင့်ကြံမှု၊ လိုက်နာစရာတွေကို အထက်ပါ(၁၀)ချက်အတိုင်း လက်လွပ်စပယ် မယုံကြည်ဘဲနဲ့ မိမိကိုယ်တိုင် တွေးတောကြံစည်ပြီး လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ကြည့်ပါ။ အဲဒီလို လုပ်ဆောင်ကြည့်တဲ့အခါ မိမိလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာ သူတစ်ပါးထိခိုက်သလား၊ မျက်မှောက်ဘ၀မှာရော ကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးဒဏ် ဘယ်ဟာက ပိုများသလဲ။ ပညာရှိလူကောင်းတွေကရော မိမိလုပ်ရပ်ကို ကြိုက်နှစ်သက်သဘောကြရဲ့လား၊ အားပေးကြရဲ့လား။ ငါလုပ်တာကို ကြိုက်တဲ့လူနဲ့မကြိုက်တဲ့လူ ဘယ်ဟာက ပိုများသလဲစတဲ့ အချက်အလက်များကို စဉ်းစားတွေးတောကြည့် အဖြေရှာပြီးမှသာ ဘယ်အရာဟာ ကောင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်။ ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လုပ်ရပ်ဟာ မှန်တယ်။ ဘယ်ဘာသာဝင်တို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ပြောပြမှု၊ လမ်းညွှန်ပေးမှုဟာ သဘာဝကျပြီး လက်တွေ့နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိတယ်။ အများအတွက်ရော မိမိအတွက် အကျိုးများတယ်ဆိုတာတွေ ကို သိရှိနားလည်ပြီးမှသာ အမှားနဲ့အမှန်ကို ဆုံးဖြတ်ယုံကြည်လိုက်နာကျင့်သုံးပါ။
ဘယ်အလုပ်က ကောင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်၊ ဘယ်လိုလူက လူကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ဦးဇင်းရှင်းတာနဲ့မလောက်သေးဘူးဆိုရင်တော့ ကောင်းတဲ့လူနဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်ကို သိရှိအောင် ‘’လူဆိုသည်မှာ” သီချင်းလေးကို နားထောင်ကြည့်ရင်လည်း သိရှိလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
မိမိက ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်နေမယ်ဆိုရင် အဲဒီအလုပ်ကြောင့် မျက်မှောက်ဘ၀မှာတော့ ကောင်းကျိုး ခံစားရမယ်ဆိုတာ ပြောစရာမလိုပါ။ ဒါပြင် နောက်ဘ၀တွေမှာ ဒီကောင်းတဲ့အလုပ်ကို လုပ်ရခြင်းကြောင့် ကောင်းတဲ့ရလာဒ် ခံစားရမလား၊ မခံစားရဘူးဆိုတာ မသေချာခဲ့ရင်လည်း မိမိအတွက် အရှုံးမရှိပါဘူး။ မိမိဟာ မျက်မှောက်ဘ၀မှာတော့ ကောင်းတဲ့အကျိုးကို ခံစားနေရတယ်လေ။ နောက် ဘ၀တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးလည်း ဒီလိုလေးစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင် ကောင်းတဲ့အလုပ် လုပ်တဲ့သူဟာ မိမိအတွက် အရှုံးမရှိဘူးဆိုတာ သိပါလိမ့်မယ်။ ကောင်းတဲ့အလုပ်ကို လုပ်တဲ့သူသည်
၁။ နောက်ဘ၀ရှိလို့ ကောင်းမှုမကောင်းမှုအကျိုးဆက်ကို ခံစားရရင်လည်း မိမိဟာ ကောင်းတာ လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် ကောင်းကျိုးကိုပဲ ခံစားရမှာမို့ စိုးရိမ်ပူပန်စရာ မလို။
၂။ နောက်ဘ၀မရှိလို့ ကောင်းမှုမကောင်းမှုအကျိုးဆက်ကို မခံစားရရင်လည်း ကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာ မျက်မှောက်မှာတော့ စိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့ နေရတဲ့အတွက် စိုးရိမ်ပူပန်စရာ မလို။
၃။ နောက်ဘ၀မှာ မကောင်းမှုဒဏ်အကျိုးပေးရှိရင်လည်း မိမိဟာ မကောင်းတာမလုပ်ခဲ့အတွက် စိုးရိမ်ပူပန်စရာ မလို။
၄။ နောက်ဘ၀မှာ မကောင်းမှုဒဏ်အကျိုးပေး မရှိရင်လည်း မိမိဟာ မကောင်းတာမလုပ်တဲ့အတွက် မျက်မှောက်မှာ စိတ်ချမ်းသာစွာနေရတာမို့ စိုးရိမ်ပူပန်စရာ မလို။
အထက်ပါ(၄)ပါးလုံးကို ခြုံငုံပြောရမယ်ဆိုရင် မိမိကသာ မကောင်းမှုကို မလုပ်ဖို့အဓိကပါပဲ။ နောက် ဘ၀မှာ ကောင်းမှုမကောင်းမှုတို့ရဲ့ အကျိုးပေးရှိခဲ့ရင်လည်း မိမိက ကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲ လုပ်သူမို့ ကောင်းတာပဲခံစားရမှာဖြစ်ပြီး မကောင်းဒဏ်အတွက် စိုးရိမ်စရာမလို။ တကယ်လို့ နောက်ဘ၀ မရှိလို့ ကောင်းမှုမကောင်းမှုတို့ရဲ့ အကျိုးပေးမရှိခဲ့ရင်လည်း ကောင်းတဲ့အလုပ် လုပ်တဲ့သူဟာ မျက်မှောက်မှာ မိမိစိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့နေရသလို အများလည်း စိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့ နေရခြင်း အကျိုးများ ခံစားရပါတယ်။
အဲဒီတော့ ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူဟာ မျက်မှောက်မှာတော့ မိမိရော သူတစ်ပါးရော စိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့ နေရမှာကတော့ အမှန်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဘ၀ရှိလို့ ကောင်းကျိုးဆိုးဒဏ်တွေ ခံစားရမယ်ဆိုရင်လည်း ကောင်းတာလုပ်တဲ့သူဟာ မျက်မှောက်အတွက်ရော၊ နောက်ဘ၀အတွက်ရော အမြတ်ရတဲ့သူပါ။ နောက်ဘ၀မရှိလို့ အကျိုးပေးတွေ မရှိဘူးဆိုရင်လည်း မိမိမျက်မှောက်ဘ၀ အတွက်အမြတ်ရတာမို့ အရှုံးတော့ မရှိဘူးဆိုတာ သိထားရပါမယ်။
ကိုယ်လုပ်တဲ့လုပ်ရပ်ဟာ ကိုယ့်အပေါ်မှာ ပြန်လည်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာကို မျက်မှောက်မှာတော့ သာဓကများစွာရှိလို့ ထူးထွေပြောစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူး။ ဥပမာ-မိမိက သူတစ်ပါးကို နာကျင်အောင်လုပ်လိုက်ရင် သူတစ်ပါးက မိမိကို ပြန်လည်နာကျင်အောင် လုပ်ချင်ပါလိမ့်မယ်။ မိမိက သူတစ်ပါးကို တစ်စုံတစ်ခုကူညီပေးမယ်ဆိုရင် အဲဒီလူဟာ မိမိကို အပြုံးနဲ့ဖြစ်စေ ကျေးဇူးတင်တဲ့ အနေနဲ့ဖြစ်စေ ရွှင်ပြတဲ့တုံ့ပြန်မှုကို ရရှိတာဟာ သဘာဝတရားပါပဲ။ အဲဒီလိုပါပဲ မိမိလုပ်တဲ့ ကောင်းတဲ့ အလုပ်၊ မကောင်းတဲ့အလုပ်တို့ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေဟာ မိမိဆီကို တစ်ချိန်ချိန်မှာ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတာဟာ သဘာဝတရားမို့ ဘယ်သူမှ ငြင်းလို့မရပါ။
ဒါကြောင့် မိမိတို့ဟာ အကောင်းကြိုက်တဲ့လူတွေ၊ ချမ်းသာသုခကိုပဲ ခံစားချင်တဲ့လူတွေမို့ အဲဒီချမ်းသာသုခပျော်ရွှင်မှုတွေ ခံစားရအောင် မိမိကိုယ်တိုင်လည်း သူတစ်ပါးချမ်းသာသုခဖြစ်စေမဲ့ အရာများသာပြုလုပ်ပြီး သူတစ်ပါးဒုက္ခဆင်းရဲဖြစ်မဲ့အရာများကို ရှောင်ကြဉ်ရမယ်ဆိုတာ သိရှိထားကြ ပါလေ။ အဲဒီလို မိမိတို့စိတ်ကို သတိပညာလေးနဲ့ထိန်းချုပ်ပြီးသကာလ အမှန်တရားရဲ့သဘာဝကို အမှန်တရားအတိုင်းသိရှိပြီး အမှန်တရားကိုလုပ်ဆောင်ကာ အမှန်တရားတို့ စုဝေးရာကို လျှောက် လှမ်းနိုင်အောင် ပြုလုပ်ရပါမယ်။
ဦးဇင်း အွန်လိုင်းသုံးရတဲ့ အချိန်လေးမှာ မိမိက ပလ္လင်ပေါ်တက် တရားဟောဖို့ မဖြစ်နိုင်သေးတာကြောင့် ကိုယ်တက်နိုင်တဲ့ အွန်လိုင်းကနေ ဖြစ်နိုင်သမျှ လူတွေကို အမှန်တရားသိအောင် ပြုလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီး အမေးအဖြေများ ပြုလုပ်ပေးခဲ့တာပါ။
ဘယ်ဘာသာဝင်ရယ်လို့ သီးသန့်ခွဲခြားထားတာ မရှိဘူး။ သိချင်သမျှကို ဦးဇင်းအသိဉာဏ်ရှိသမျှ ဖြေပေးခဲ့ပါတယ်။ အဓိကကတော့ အမှန်တရားကို သိဖို့ပါပဲ။ ဒီလိုပြုလုပ်ပေးတယ်ဆိုတာကလည်း ဦးဇင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာ မြတ်ဗုဒ္ဓကို အတုယူအားကျမိလို့ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မြတ်ဗုဒ္ဓဟာ သူ့တစ်ယောက်တည်းတွက်ဆို ချမ်းသာသုခကို ရနေပါလျက် ဘ၀ပေါင်းလေးသင်္ချေနဲ့ကမ္ဘာတစ်သိန်းကာလပတ်လုံး သူများမလုပ်နိုင်တဲ့ အရာတွေကိုပြုလုပ်ပြီး ပါရမီဖြည့်ကာ အသိဉာဏ်ပညာများရအောင် အားထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလိုအားထုတ်ပြီးလို့ ကိုယ်တိုင်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘ၀ကိုရတဲ့အခါမှာလည်း မနားမနေ တစ်ရက်ကို(၂၄)နာရီရှိတဲ့အထဲက (၂)နာရီကျော်လေးသာ အနားယူပြီး ကျန်တဲ့အချိန်တွေကို အများအတွက် အလုပ်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဦးဇင်းလည်း မြတ်ဗုဒ္ဓလောက်မစွမ်းနိုင်ပေမဲ့ စွမ်းနိုင်သလောက်တော့ ဖြစ်နိုင်သမျှ အများအကျိုးရှိအောင်၊ အများအမှန်တရားကိုသိရှိအောင်ဆိုပြီး ခုလို အမေးအဖြေများ ပြုလုပ်ပေးခဲ့တာပါ။
ဦးဇင်းအနေနဲ့ကတော့ ဘယ်ဘာသာကိုမှ အဆိုးမမြင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မိမိတို့သိထားရမှာက ဘာသာဆိုတာထက် မိမိကိုယ်ကို စိတ်ထားကောင်းဖို့နဲ့ အမှန်တရားကိုသိမြင်ပြီး အဲဒီအမှန်တရားကို လက်ကိုင်ထားကျင့်သုံးဖို့ပါပဲ။ တချို့ဘာသာဝင်တွေမှာ စိတ်ထားကောင်းသူတွေ အများကြီးရှိသလို စိတ်ထားမကောင်းသူတွေလည်း ရှိကြပါတယ်။ အဲဒီလိုပါပဲ ဦးဇင်းတို့ဘာသာမှာလည်း ကောင်းသူရော မကောင်းသူရော အများကြီးပါ။ အဲဒီတော့ အဓိကအကျဆုံးအရာက ဘာသာဆိုတာထက် အမှန်တရားကိုသိဖို့နဲ့ အဲဒီအမှန်တရားကိုလက်ကိုင်ကျင့်သုံးပြီး စိတ်ထားကောင်းလေးနဲ့ ပြုလုပ်နေထိုင်သွားကြဖို့ပါပဲ။ ဒါဟာ အဓိကအကျဆုံးပါပဲ။
ပြုံး သေ နဲ့ မဲ့ သေ
မင်းမြှောက်တန်ဆာများ ဆင်ယင်ထားသော ရုပ်ပွားဆင်းတုတေ...